QM oo ku baaqday in doorasho hufan oo nabdoon lagu qabto Koonfur Galbeed - Halbeeg News
QM oo ku baaqday in doorasho hufan oo nabdoon lagu qabto Koonfur Galbeed
in Soomaaliya, War Degdeg, Xulka
MUQDISHO( HALBEEG)- Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in dhammaan dhinacyada iyo murashaxiinta Koonfur Galbeed si wadajir ah u shaqeeyaan si doorashada madaxtinimo ee Koonfur Galbeed ay si nabadgelyo ah ugu qabsoonto.
War qoraal ah oo uu soo saaray Nicholas Haysom, xoghayaha gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa loogu baaqay in la qabto doorasho loo dhan yahay si waafaqsan shuruucda u taalla Koonfur Galbeed.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ayaa intaasi ku daray in laga fogaado wax walba oo keeni kara khilaaf ama wax u dhimi kara habsami u socodka doorashada Koonfur Galbeed.
“Doorashadan waa mid kamid ah doorashooyin ka dhici doona dalka kuwaasoo isugu jira heer dowlad goboleed iyo mid Federalba 2020 ugu horeeyay ee laga qabanayo dalka, waxaa looga baahan yahay inay u dhacdo si nabad ah oo hufnaan leh.” ayaa lagu yiri warbixinta Qaramada Midoobay.
“Waxaan hoosta ka xariiqayaa in beesha caalamka ay sidan oo kale ay bishii November 2016 ay Soomaalida ugu baaqday in la xaqiijiyo qeybaha kala duwan ee siyaasadda sidii ay doorashada xilliga ugu dhici lahayd si wanaagsan.” ayuu sii raaciyay Haysom.
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa ku baaqay wadahadal iyo si nabad ay ugu qabsoonto doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa ina y doortaan Madaxweyne 17-ka bishan Nofembar ee sanadkan.
Ururka midowga culumada Muslimiinta dunida oo doortay hoggaamiye cusub
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Shariif Xasan oo is Casilay